Ama-Drones nobuhlakani bokuzenzela ukusisiza silwe nokuqothulwa kwezilwane | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Ama-Drones nobuhlakani bokufakelwa ukusisiza silwe nokuqothulwa kwezilwane
Kancane kancane kuyakhonjiswa ukuthi ukusebenzisa ubuchwepheshe obusha ezindaweni ezahlukahlukene zempilo kungasisiza ekuxazululeni izinkinga ezibalulekile ngejubane elimangazayo. Sinesibonelo sokuthi iqembu labaphenyi, elizinikele ekulondolozeni impilo yezinhlobo ezahlukene zezilwane ezisengozini yokuqothulwa, kukhombisile ukuthi ingxube yama-drones anokuhlakanipha okufakelwayo anganela ukwenza umsebenzi wakho usheshe kakhulu futhi, ngaphezu kwakho konke, ungabi yisidina.
Njengoba ungafunda esihlokweni esishicilelwe kuphephabhuku le-Bitanic Ecological Society 'Izindlela ku-Ecology naku-Evolution', Ithimba labacwaningi lase-Australia linqume ukuthi ukubalwa kwezilwane zasendle kuyadingeka ukuthuthukisa inqubo ngangokunokwenzeka. Ngemuva kokuhlolwa okuningi, bakwazile ukwakha uhlelo olukwazi ukubala izinhlobo ezahlukene zezilwane, kufaka phakathi izinhlobo eziningi zezinyoni, okwenza ipulatifomu yazo kunembe kakhudlwana uma kuqhathaniswa nezinhlelo ezisetshenziswe kuze kube manje ngendlela yendabuko.
Iqembu labacwaningi base-Australia seliqale ukusebenzisa inhlanganisela yama-drones nobuhlakani bokufakelwa ukubala amakoloni ezinyoni ezisengozini yokuqothuka.
Njengoba kuveziwe UJarrod Hodgson, umbhali oholayo wephepha locwaningo kanye nomfundi we-PhD e-Faculty of Biological Sciences e-University of Adelaide:
Njengoba kunezilwane eziningi kangaka emhlabeni jikelele ezibhekene nokuqothulwa, isidingo sethu semininingwane enembile yezilwane zasendle asikaze sibe sikhulu. Ukuqapha okunembile kungathola ushintsho oluncane enanini lezilwane. Lokho kubalulekile ngoba uma besingalinda ushintsho olukhulu kulezo zinombolo ukuqaphela ukwehla, kungaphuza kakhulu ukonga uhlobo olusengozini.
Kubantu basendle, inani langempela labantu alaziwa. Lokhu kwenza kube nzima kakhulu ukuhlola ukunemba kwendlela yokubala. Besidinga ukuhlola ubuchwepheshe lapho besazi khona impendulo eyiyo.
Imiphumela izosiza ekucwengisiseni nasekuthuthukiseni imigomo yokuqapha i-drone ukuze ama-drones angabi nomthelela omncane noma angabi namthelela omncane ezilwaneni zasendle. Lokhu kubaluleke kakhulu ezinhlotsheni ezijwayele ukuphazamiseka nalapho izindlela zendabuko ezibandakanya ukusondelana nezinhlobo zingenakwenzeka noma zingathandeki.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » drones » Ama-Drones nobuhlakani bokufakelwa ukusisiza silwe nokuqothulwa kwezilwane
I-Branch Technology iyinkampani eyenza ukushicilelwa kwale ndlu enhle
IStratasys, iDassault Systèmes kanye ne-Easton Lachappelle bahlangana emizamweni yokwakha izitho zokuphrinta ezingcono